Online Waxyaabaha Caymiska Warqada Cadaanka ah - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog Online Waxyaaba Waxyeelo Caddaan Ah
Lama yaabin laakiin wali waa xag jir !! Sacab weyn
Dawlada UK waxay muddo dheer sugaysay Warqada Cadaanka ah ee Ceymiska Internetka ugu dambeyntii wuxuu ka muuqday 8th April 2019. Haddii aad rabto aragti dhakhso leh (ish), war-saxaafadeed ayaa soo saartay Home Office-ka halkan.
Haddii aad jeclaan lahayd falcelin ka timid qof runtii sifiican u fahmay arimahan, halkan waxaa ku yaal boostada martida martida. John Carr, khabiir hogaaminaya, ayaa qoray…
Waxaa si diirran u soo dhoweeyey carruurta, waalidiinta iyo ururada kale ee bulshada. Taasi waa sababta oo ah waa dukumiinti heerka koowaad ah, oo muujinaya bilowga hanaan cusub oo maamul internet oo UK ah. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuu ogyahay waxa halkan ka dhacaya wuxuu leeyahay dhawaaqa casriga ah ee dimoqraadiyad kasta oo xor ah adduunka. Sabab baa jirta taas.
Waa kuwan cinwaanada:
Yaa ku jira gudaha?
Shirkadaha ay yihiin "Gudaha baaxadda" waa kuwa "U oggolow dadka isticmaala inay wadaagaan ama soo helaan waxyaabaha soo-saarka isticmaala ama la falgalo internetka kale." Waxaan u maleynayaa inay tahay hab kale oo loola jeedo "warbaahinta bulshada". Laakiin waxaa dhici karta in ay ka sii ballaadhin karto shirkadaha sida caadiga ah loo maleynayo inay yihiin goobaha warbaahinta bulshada iyo adeegyada.
Waajibaadka sharciga ah
Xarunta dhexe ee Warqadda Cad waa ujeedada lagu dhawaaqay ee ah in la sameeyo waajibaad cusub oo sharci ah oo daryeel ah si shirkadaha looga dhigo mas'uuliyad dheeri ah oo ku saabsan badbaadada isticmaaleyaashooda iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha ama howlaha ka socda adeegyadooda.
Ku hoggaansamida hirgelinta by madax-bannaani madax-bannaan
Sharciye cusub oo sharci ah ayaa la dhisi doonaa. Xeerarka waxqabadka waxay qeexi doontaa waxa laga filayo shirkadaha u qalma. Haddii shirkaduhu rabaan inay gutaan waajibaadka la sheegay qaab aan lagu qeexin koodh, waa inay u sharxaan una caddeeyaan jaangooyaha sida habkooda kale ay si wax ku ool ah u gaarsiin doonaan isla heerkaas ama ka sii saameyn badan.
Shuruudaha shirkadda iyo shuruudaha ayaa muhiim u ah
Shuruudaha ganacsiga iyo shuruudaha adeegyadooda waa inay ahaadaan kuwo cad oo la heli karo, oo ay ku jiraan carruurta iyo dadka kale ee nugul ee isticmaala. Tani horeyba waa shuruud GDPR ah oo ay u badan tahay in si buuxda loogu qeexi doono nidaamka dhaqanka ee naqshada ku habboon da'da taas oo hay'adda gaarka ah ee Boqortooyada Ingiriiska (ICO) ay dhowaan daabici doonto (?)
Guud ahaan, jaangooyooyinka cusubi waxay qiimeyn doonaan sida firfircoon shuruudaha iyo shuruudaha shirkadda loo hirgelinayo. Si loo ogeysiiyo warbixintiisa iyo in ay hagto ficilkeeda sharciyadeed, maamuluhu wuxuu awood u leeyahay inuu u baahan yahay warbixinnada sannadlaha ah ee shirkadaha.
Aqoon iyo miisaaman
Xeer-ilaaliyuhu wuxuu tixgelin doonaa awoodda shirkadaha si uu u buuxiyo shuruudaha sharciyeynta, oo ay ka mid yihiin in la gaari karo goobaha ay ka muuqato marka loo eego saldhigga isticmaalaha iyo darnaanta waxyeelada.
Qaabkan ujeedka ah ayaa sidoo kale lagu dhejin doonaa sharciyada kaas oo cadeyn doona in shirkadaha ay yihiin loo baahan yahay si ay u qaataan tallaabo macquul ah oo loo qoondeeyey si wax looga qabto dhibaatooyinka adeegyadooda (xoojin).
Xeer-ilaaliyuhu wuxuu dejin doonaa rajooyinka cad ee shirkadaha ay tahay in ay sameeyaan si wax looga qabto hawlaha sharci-darrada ah iyo in carruurtu ku badbaado online-ka.
Uma jeedo inaad ka baxdo mabda'a difaacida barxadda
"Qaab-dhismeedka cusub ee nidaamku (wuxuu qaadan doonaa) qaab habboon oo dheeraad ah (isagoo sii kordhinaya) mas'uuliyadda adeega ee la xiriirta dhibaatooyinka online-ka ah"
Waxaan rajeynayaa in tani ay horseedi doonto heer aad u sareeya oo lagu soo deynayo PhotoDNA iyo algorithms kuwaas oo ogaan kara xanuunka iyo dabeecadaha kale ee waxyeellada leh sida xoog sheegashada.
Maaha waqti hore.
Magacaabista, dhirbaaxada iyo daahfurnaanta
Xeer-ilaaliyuhu wuxuu awood u leeyahay inuu shirkadaha u baahdo si ay macluumaad u bixiyaan. Transparency wuxuu noqon doonaa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka cusub. Shirkadaha aan kor u qaadeynin dabka waxaa loo aqoonsan doonaa si cad.
Ganaaxyada, xannibista iyo masuuliyadda dambi
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay yeelan doontaa qalab kala duwan si loo daboolo oo loo taageero siyaasadda oo ay ka mid tahay karti u leh in ay qaadaan ganaaxyo waaweyn, laga yaabo inay xitaa u baahdaan goobo ama adeegyo si loo xakameeyo. Sameynta maamulayaasha sarsare waa dambi culus oo ku saabsan guuldarooyinka ayaa sidoo kale ku jira kaararka.
Caleemo cad oo cagaar ah
Waxaa la leeyahay Warqadda Cad waxay si xoog leh ugu dhagan tahay cagaar. Tani waxay ka dhigan tahay inay jiraan faahfaahin badan oo aad muhiim u ah in laga shaqeeyo. Laba ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa ah aqoonsiga iyo awoodaha xakamaynta iyo sida ay tahay in loo maalgaliyo.
Wax badan ayaa u ciyaaraya
Waxaa jira wakhti la-talin rasmi ah oo saddex bilood ah, laakiin waxaa dhici karta in shaki yar laga yaabo in arrimahan ay nagu sii wadi doonaan wax ka sii wayn. Sharci waa loo baahan yahay. Kala baxsashada, taasi waa wax dhif ah oo laga dhaadhicin karo.
Tijaabo kale oo geesinimo leh laakiin waxay leedahay taageero ballaadhan
Dabcan waxaa jiri doona doodo ku saabsan faahfaahin muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, dhammaan xisbiyada waaweyn ee siyaasadeed si ballaaran ayey isugu xiran yihiin marka loo eego qodobbada muhiimka ah ee ku yaal Warqadda Cad. Taasi waa sababta oo ah ra'yiga dadweynaha ayaa si adag uga dambeeya tallaabooyinka noocan ah. Waxaa jiri doona dadka fikirka aaminsan oo wali qaba in Dowladaha iyo Baarlamaanada ay ka fogaadaan arrimaha nuucaan ah. Laakiin markii xitaa Mark Zuckerberg uu ku baaqayo in la waafajiyo sharciga waxaan ka shakisanahay in xagjiriinta noocan oo kale ah ay heli doonaan culeys dhab ah.
Albaabada ugu dambaysa ee Salad Salaad ah ayaa la ciribtiray oo la shaabadeeyey.
Boggani asal ahaan waxaa lagu dhajiyay April 8, 2019 by John Carr. Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto blogyada kale ee aan ka soo qaadnay Yooxanaa, halkaan waa.